Iindawo ezinemibala yegradient ye-UI | Izidalwa ezikwi-Intanethi
IiSayithi ezinombala wegradient wombala we-UI
UJorge Neira | | Iiphalethi zombala
Njengoko ixesha lihamba I-gradient ilawula ukufumana indawo ngakumbi nangakumbi Uyilo lwewebhu, yiyo loo nto kweli nqaku siza kuthetha ngale nto, ukuze kube lula kuwe.
Ukuba ubukwilizwe loyilo lwewebhu iminyaka embalwa okanye ukuba uhoye zonke utshintsho olwenziwe luyilo Kule minyaka idlulileyo, unokuqonda ukuba Imibala yegradient Babuyile kwaye bangcono kakhulu kunoko sasinako kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ngaphandle kwesilumkiso kwaye ngequbuliso kubonakala ngathi i-gradient ibuyile nayo yonke into, njengoko ibonakala kuyo yonke indawo, ikakhulu kwi Uyilo lwe-UI yewebhu.
I-gradient yinxalenye ye imeko yoyilo yonyaka ka-2017Nangona kunjalo, ayenzi ngendlela ebekade isetyenziswa ngayo ngaphambili, kodwa ngendlela ecokisekileyo ngakumbi kunye nesitayile.
Ke ngoko, ngenjongo yokukunceda ufumane i- Umgangatho ofanelekileyo weprojekthi yakho elandelayo Uyilo lwewebhu, sikubonisa iisayithi ezintathu ezibonelela ngombala omangalisayo weephalethi.
1 Iimpawu zeWebhu
2 Iimpawu zeUi
IWebGradients inewebhusayithi yasimahla, ethi iqulethe ngaphezulu kwe-180 imibala yeephalethi Iimpawu zomgama ezijika ziba mhle kwaye zinomtsalane kunabanye kwaye sinokuzisebenzisa ngaphandle kwengxaki.
Amanqaku ayo alungileyo ngala:
Ifanelekile kwiwebhu, ukusukela oko bonisa ikhowudi yeCSS3 ukulungele ngokupheleleyo ukukopa kwiphepha lakho lewebhu.
I-UiGradients yenzeka ukuba ibe yindawo iyafana kwiWebGradients, Ikwanenani elibanzi nokwahluka kwenani leephalethi zombala wegradient kwaye ikwasetyenziswa ngendlela efanayo.
Umahluko kuphela phakathi kwe-uiGradients kunye neeWebGradients zilele kwinto yokuba ngamnye kubasebenzisi bayo anayo Ukubanakho ukwenza igradient yakho Ngale ndlela abanye abantu banokuzuza kuyo.
Ibonisa ikhowudi yeCSS ekulungele ngokupheleleyo ukukopishwa kunye nokuncamathiselwa ngabasebenzisi.
Vumela abasebenzisi ukuba benze eyabo ithambeka.
Kwi-Blend, abasebenzisi banethuba lokwenza njalo Ukucaciswa ngokwabo kungekuphela kwemibala yabo kodwa kunye neegradients kwezi. Le ndawo isebenza ngolu hlobo lulandelayo: ukhetha imibala emibini, ucofa "Uxubo" kwaye nge-voila, i-gradient ilungile.
Iyasebenza, iyenza ukuba ikulungele ukubonwa ngokukhawuleza.
Imiboniso Ikhowudi yeCSS njengabanye, ilungele ngokupheleleyo ukuba abasebenzisi bakope kwaye bancamathisele.
Inefomathi yokubonisa yomda kunye nomgca.
Iiwebhusayithi ezintathu siqinisekile ngazo uya kufumana inzuzo enkulu kuyilo lwakho olulandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iiphalethi zombala » IiSayithi ezinombala wegradient wombala we-UI